सबैका आँखा सिङ्गापुरतिर, ट्रम्पको नजर नोवेल शान्ति पुरस्कारतर्फ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार १९:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । शुक्रबार क्यानाडाका लागि प्रस्थान गर्नुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पत्रकारहरुले ह्वाइट हाउसमा सोधे— तपाईँको सिङ्गापुर बसाई कति लामो हुन्छ ? राष्ट्रपति ट्रम्पको जवाफ थियो— किमसँगको वार्ता कस्तो हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्प जि ७ को बैठकका लागि शुक्रबार क्यानाडा जाने तयारीमा थिए । उनी त्यतैबाट सिङ्गापुर जाने कार्यक्रम छ । उनले भने, म त्यतैबाट सिङ्गापुर जान्छु तर सिङ्गापुरमा बसाई कति दिन लम्बिन्छ भन्ने कुरा जुन १२ को पहिलो वार्तापछि मात्र थाहा हुन्छ । उनको भनाई थियो— हामी फोटो खिचेर मात्र फर्किन पनि सक्छौँ र एक दुई दिन वार्तामा बस्न पनि सक्छौँ । यो सबै कुरा मङ्गलबारको पहिलो बसाईले निर्धारण गर्नेछ ।
गत अप्रिल २७ मा दुई कोरियाबीच ऐतिहासिक भेटवार्ता भयो । उत्तर कोरियाली सर्वाेच्च नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनबीच भएको सो भेटवार्ताले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको थियो । अकस्मात र अभूतपूर्व सो वार्तामा ऐतिहासिक सम्झौता पनि भयो । यसैले नै अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच वार्ताको मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
दक्षिण कोरियालाई मात्र नभएर उत्तर कोरियाप्रति अमेरिकाको पनि विश्वास बढाएको छ । आणविक अस्त्र उत्पादन नगर्ने, परीक्षणस्थल भत्काउने शर्त अमेरिकाले राखेको थियो । जुन उत्तरले पूरा गरेको छ । उसले अमेरिकासहितकै पत्रकारलाई उपस्थित गराएर परीक्षणस्थल भत्कायो । यसले पनि सिङ्गापुर वार्ताको वातावरण सकारात्मक बनाएको छ ।
यो वार्ताले उत्तर कोरिया या अमेरिका कस्लाई के फाइदा भयो भन्ने बहस अलग्गै छ । यसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अमेरिकी नागरिकले गर्ने गरेको कचकचमा केही सहजता थपेको महसुश गराएको छ । कहिले आफ्नो निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेपको विषय त कहिले इरानमाथिको पारमाणविक सम्झौता खारेजीजस्ता विषय उनको कार्यकालमा विवादित विषय हुन् । अमेरिकीहरु राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिको आलोचना गर्छन् । त्यसैले पनि उनले यस वार्ताबाट आफ्नो विदेश नीतिको जस केही मात्रामा भएपनि लिन चाहन्छन् ।
उता उत्तर कोरियाले पनि विश्व समुदायमा आफ्नो उचाईँ बढेको महसुश गरेको छ । विश्व राजनीतिमा एक्लिएर र सबै प्रकारको नाकाबन्दी सहेर बसेको उत्तरका लागि अमेरिकासँगको विश्व चर्चित वार्ता एउटा ठूलो अवसर हो । साथै यस वार्ता अघि पनि उत्तर कोरियाका नेता किमले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनसँग महिना दिनमा दुई पटक र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ पनि दुई पटकसम्म गरेको भेटवार्तालाई पनि उत्तरले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
(राससका लागि एकराज पाठकको रिपोर्ट)
सोल्टीमोडबाट खुंखार डाका मनिष ‘कट्टु’ पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंको सोल्टीमोडबाट खुंखार डाका ‘कट्टु’ भन्ने मनिष मानन्धरलाई पक्रिएको छ ।
२८ वर्षीय मानन्धरलाई काठमाडौको सोल्टीमोडबाट…
मेयर चौधरी आक्रमण: नेकपा माओवादी विप्लवका तीन जना पक्राउ परे !
कैलाली । घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि साघांतिक आक्रमण गरेको आरोपमा…
सत्ता र गुण्डाको आडमा सिङ्गै कलेज कब्जा !
काठमाडाैं । नियम–कानुन कसरी अवज्ञा गरिन्छ र अर्काको सम्पत्ति कसरीसम्म हडप्न खोजिन्छ भन्ने तथ्यको रोचक उदाहरण भक्तपुरमा सञ्चालित नेपाल…
आज र भोली धेरै ठाउँमा पानी र हिउँ पर्ने सम्भावना
काठमाण्डौ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बुधबार र भोली बिहीबार देशका धेरै ठाउँमा पानी र हिउँ पर्ने…